Ethereum 2.0 ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့်အရမ်းအရေးကြီးတာလဲ - Cazoo
Ethereum 2.0 ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့်အရမ်းအရေးကြီးတာလဲ
ပင်မစာမျက်နှာ » ပင်မစာမျက်နှာ » Ethereum 2.0 ဆိုတာဘာလဲ။ ဘာကြောင့်အရမ်းအရေးကြီးတာလဲ
tag ကို: ethereum, ethereum ၂၀၀၀, Ethereum Virtual Machine (EVM), Ethereum WebAssembly (EWASM), လောင်းကြေး၏အထောက်အထား, အရွယ်အစား, Vitalik Buterin
ဘယ်အချိန်မှာ 2015 မှာ Ethereum အဓိကပိုက်ကွန်ထဲသို့ဝင်, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကမ္ဘာ၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏အကျိုးစီးပွားနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုနှိုးဆော်ခြင်းနှင့်သင်တန်း၏သင်တန်းကိုလည်း။ တိုးချဲ့နိုင်မှုနှင့်လုံခြုံရေးပြissuesနာများသည် protocol တွင်ပေါ်လာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏မျှော်လင့်ချက်များသည်အနည်းငယ်ပျော့ပြောင်းသွားခဲ့သည်။ တိုးတက်မှုများကို code ထဲသို့တိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့ပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုသည်ဘယ်တော့မှမရပ်တန့်ခဲ့သော်လည်း Ethereum သည်အနာဂတ်တွင်အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်ရန်အလုံးစုံစစ်ဆေးပြုပြင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမကြာမီလူတိုင်းသိသွားခဲ့သည်။ ၎င်းကိုအနာဂတ်၌ပြီးစီးစေရန်အတွက် Ethereum 2.0 ကို“ code” အမည်ဖြင့် Serenity ဖြင့်မွေးဖွားခဲ့သည်။
ဤတွင်, Cazoo မှာကျနော်တို့ cryptocurrencies ၏အလွန်ကြီးမားသောကမ္ဘာ၏အများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်စီမံကိန်းများကိုဖော်ပြရန်, စျေးနှုန်းများနှင့် features တွေခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကုန်သွယ်၏အခြေခံကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့် blockchains အပေါ်အဆင့်မြင့်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ပါ။ တိုတိုပြောရရင်အရသာအားလုံးအတွက်တစ်ခုခုရှိတယ်။
Cazoo သည်ကျွန်ုပ်၏သုတေသနကိုအလွတ်ကျက်ရန်ခွင့်ပြုသည့်စာအုပ်၊ ဒိုင်ယာရီ၊ Moleskine မှတ်စုများဖြစ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တဲ့အရာဟာဝဘ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဝဗ်ပေါ်မှာပါသောသင်လည်းအဲဒါကိုသုံးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့ပြန်ယူလာတာပါ။ တကယ်လို့အဲလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါ ၀ မ်းသာတယ်။
သွားကြည့်ရအောင် Ethereum 2.0 ဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုရှာကြည့်ရအောင်။
Ethereum ကိုသင်ဝယ်ချင်ပါသလား? သင် Binance တွင်ပြုလုပ်ပါကအသုံးပြုပါ ဒီရည်ညွှန်း link ကိုကော်မရှင်အားလုံးမှာ၊ အမြင့်ဆုံးလျှော့စျေး ၂၀% ရတယ်။ ထာဝရ!
Ethereum 2.0 ၏အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်
Ethereum 2.0 သည်ဖြေရှင်းလိုသော Ethereum ၏ပြproblemsနာများ
Ethereum 2.0 နဲ့ဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲ။
အဆင့် 0: လောင်းကြေး၏သက်သေအထောက်အထားနှင့် Beacon Chain
အဆင့် 1: Sharding
အဆင့် 3: EWASM
Ethereum 2.0 update နှင့် ETH စျေးနှုန်းအပေါ်သက်ရောက်မှု
Preston Van Loon ဖော်ပြသည့် Ethereum 2.0 Serenity သည်ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်လက်ရှိ Ethereum နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော blockchain ဖြစ်သည်။ သူ့ဟာသူထဲမှာ Ethereum အဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်တစ်ခက်ခက်လမ်းဆုံလမ်းခွမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် မူရင်းကွင်းဆက်။
Preston ဗန် Loon - Prysmatic Labs Co-တည်ထောင်သူ Ethereum Protocol Develope
Ethereum 2.0 ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ။ ငွေသွင်းပေးပါလိမ့်မည် တချွတ် Smart Contracts မှတစ်ဆင့် Ether အဟောင်းမှကွင်းဆက်အသစ်သို့ချိတ်ဆက်သည်။ ၎င်းသည်တစ်လမ်းသွားအရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းနောက် Ethereum အစဉ်အလာအားအသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်သင့်သည်။
အစပိုင်းမှာငါပြောခဲ့သလို Ethereum ဟာ Ethereum 2.0 ထွက်လာမယ့်အချိန်မှာတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင် Ethereum ကသိပ်ပြီးသိပ်ပြီးမလွယ်ကူတော့ပါဘူး။ ဤပြောင်းလဲမှုများသည်အံ့မခန်းဖွယ်အမည်များဖြစ်သည် - Homestead March 2016, Metropolis Byzantium အောက်တိုဘာ 2017၊ Metropolis Constantinople ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 နှင့် Istanbul ဒီဇင်ဘာလ 2019 ။
ပြောင်းလဲမှု၏နောက်ကွယ်အကြောင်းရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ခဲ့သည်။ လက်ရှိဒီဇိုင်းတွင်ကန့်သတ်ချက်များစွာရှိသည်။ အဆိုပါ algorithm ကို လုပ်ငန်းခွင်၏အထောက်အထား နှင့်ဗိသုကာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများ developer ဝယ်လိုအားနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ဖူးဘူး။
အပေါ်ယံဒါကသိတဲ့အချက်ပဲ ကမ္ဘာ့ကွန်ပျူတာ (Buterin နှင့်သူ၏ Ethereum ဖန်တီးမှု၏အဓိကအာရုံစိုက်မှု) နှေးတယ်။ အခုအချိန်မှာဒီ protocol ကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသော applications များ (DAPPS) နှင့် Smart Contracts များကလွှမ်းမိုးထားသည်။ အချို့သောတိုးတက်မှုများကိုဤရှေ့တန်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်လုပ်ငန်းခွင်သက်သေပြမှုသည်လိုအပ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီကြောင်းထင်ရှားသည်။
လုံခွုံရေးEthereum တွင်သိသာထင်ရှားသောလုံခြုံရေးချိုးဖောက်မှုများမရှိခဲ့သော်လည်းတိုးတက်မှုအချို့သည်စနစ်တစ်ခုလုံး၏ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုသည်ဟုလူသိများသည်။ ၎င်းသည် Ethereum 2.0 အတွက်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ပိုမိုအားကောင်းသော platform တစ်ခုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သည်။
virtual machine အသစ်တစ်ခု: Ethereum ၏ထူးခြားဆန်းသစ်သောတီထွင်မှုများထဲမှတစ်ခုမှာ virtual machine ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်စမတ်စာချုပ်များကို run သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် နှင့် protocol ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကွန်ပျူတာစေသည်။ ပြproblemနာကဒီအပိုင်းလည်းအရမ်းနှေးနေတယ်။ Ethereum ရှိငွေပေးငွေယူများသည် network ၏ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းကိုမွမ်းမံသောကြောင့်၎င်းသည်ကြီးမားသောပြproblemနာဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် EVM (Ethereum Virtual Machine) သည်စနစ်အတွင်းရှိအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။
Ethereum 1.0 ၏ပြtheနာများကိုဖော်ပြပြီးသည်နှင့် Ethereum 2.0 သည်မည်သည့်တိုးတက်မှုများကိုဆောင်ကျဉ်းမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြည့်နိုင်သည်။ ဤတိုးတက်မှုများသည်အလွန်အဆင့်မြင့်သောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအဆင့်တွင်ရှိကြောင်းသတိရပါ၊ အမှန်တကယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစပြုပြီးဖြစ်သော်လည်းမရောက်သေးပါ။
လောင်းကြေး၏အထောက်အထားသက်သေပြချက်သဘောတူညီချက် algorithm သည် Ethereum 2.0 နှင့်အတူအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ ဒီယန္တရားကိုအသုံးပြုသည် တရားဝင်မှု၏အတိုင်းအတာအဖြစ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအစားအစုရှယ်ယာ.
အလုပ်၏သက်သေပြ blockchain, နှင့်အတူကွင်းဆက်၌တည်၏hash ပါဝါ ပိုကောင်းလေပိုကောင်း။
အစုရှယ်ယာအများဆုံးသောအရင်းအမြစ်များရှိသည့်ကွင်းဆက်ကိုပိတ်ပင်ခြင်း၏သက်သေအထောက်အထားတွင် ရှယ်ယာများတွင် ဒါအကောင်းဆုံးပါပဲ
ထို့အပြင် validators လည်းအသစ်သောအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာသည် ဝါဒဖြန့်ပိတ်ဆို့။ ဤသူများသည်အနည်းဆုံး ETH 32 ကိုချည်ထားသောအသုံးပြုသူများဖြစ်သည်။ ဤသယံဇာတလောင်းကြေးသည်အတည်ပြုသူအားလာမည့်လုပ်ကွက်၏ဖန်တီးသူအဖြစ်ရွေးချယ်ရန်ထီဝင်ရန်ခွင့်ပြုသည်၊ ထို့ကြောင့်သူ၏ဆုကိုတောင်းခံနိုင်သည်။ အကယ်၍ အတည်ပြုသူသည်အော့ဖ်လိုင်းသို့သွားသည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်ကွန်ယက်၏တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နေစဉ်မရိုးမသားပြုမူပါကအတည်ပြုသူဖြစ်လာသော Ether အချို့သို့မဟုတ်အားလုံးသည်၎င်းထံမှယူလိမ့်မည်။
အံ့အားသင့်နောက်ထပ်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုမှာဘေးဘက်ကွင်းဆက်များအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည် အပိုင်းအစ။ အစောပိုင်းကငါပြောခဲ့တာကအရောင်းအ ၀ ယ်နှေးကွေးခြင်း၊ ကွန်ယက်ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်လက်ရှိစနစ်၏အဓိကပြproblemsနာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ရှိပြီးသားဗိသုကာအတွက်အဓိပ္ပါယ်ပြsolution္ဌာန်းချက်ရှိကွောငျးပုံရသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်တစ် ဦး ချင်းကုန်သွယ်မှုနှင့်ဆက်ဆံနိုင်သည့်သီးခြားသေးငယ်သည့်ချည်နှောင်ခြင်း (shards) ဖန်တီးခြင်းသည်စိတ်ကူးကောင်းသောအတွေးနှင့်သိသာသောတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Polkadot သည်သူမမွေးဖွားကတည်းကဤအရာကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
Ethereum 2.0 လမ်းပြမြေပုံကဘာလဲ
Ethereum 1.0 လိုပဲ Ethereum 2.0 ကိုလည်းအဆင့်လေးဆင့်နဲ့စလိမ့်မယ်။
အဆင့် 0: သက်သေပြနိုင်သည့်အစုရှယ်ယာစနစ်အသစ် (Casper ဟုလူသိများ) နှင့်ဗဟို Ethereum 2.0 blockchain (Beacon Chain ဟုခေါ်သည်) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစတင်ခြင်း၊
အဆင့် ၁ - network ကို transaction များပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်အောင် blockchains 1 (shard chains ဟုလူသိများ) ဖြင့်ခွဲဝေခြင်းဖြင့် Ethereum 2.0 ၏စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း။
အဆင့် ၂ - Ethereum2ပေါ်တွင် dApps ကိုလည်ပတ်ခွင့်ပြုရန်နှင့်မူလ Ethereum ကွန်ယက်နှင့် Ethereum 2.0 အကြားပေါင်းကူးဖွဲ့စည်းရန်ခွင့်ပြုမည့်စမတ်စာချုပ်များ၏စွမ်းရည်ကိုဖွင့်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့
အဆင့် (၃) Ethereum ကိုတည်ထောင်သူ Vitalik Buterin ၏အဆိုအရ၊ ဤအဆင့်သည်“ ကျွန်ုပ်တို့စတင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထပ်ထည့်ချင်သောအရာများကိုလုပ်ဆောင်ရန်” ဖြစ်သော်လည်း EVM (Ethereum Virtual Machine) ၏ပြောင်းလဲမှုကိုအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ တွင်ဖြန့်ချိရန်စီစဉ်ထားဆဲဖြစ်သော Beacon Chain သည် Ethereum 2020 နှင့်တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ရန်စီစဉ်ထားသောကွန်ယက်၏သက်သေပြချက်ဖြစ်သည်။ Ether ထဲတွင် ၅၂၄,၂၈၈ လောင်းပြီးအနည်းဆုံး ၁၆,၃၈၄ node များကိုအတည်ပြုသူအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပြီးမှသာ၎င်းကိုစတင်မည်။ အစပိုင်းတွင် Beacon Chain သည်အသုံးပြုသူအများစုအတွက်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုမဟုတ်ပါ။ ဤကွန်ယက်သည် Dapps ကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်း၏အဓိက function ကိုကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည် အတည်ပြုများအတွက်မှတ်ပုံတင် နှင့်ကွန်ယက်အတွင်း၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု။
ဤအဆင့်သည်အဆင့် ၀.၂ အပြီးသတ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်အကြာတွင်စီစဉ်ထားသည်။ ဤအဆင့်တွင် Ethereum0Chain တစ်ခုတည်းကို shards ဟုခေါ်သောသေးငယ်သည့်အပိုင်းအစများအဖြစ်ခွဲခြားလိမ့်မည်။ မျှော်လင့်ထားသည့် shards အရေအတွက်သည်ကန ဦး လွှတ်တင်မှုတွင် ၆၄ ဖြစ်သည်။ ဤအဆင့်သည်အလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့သည်။ ၎င်းသည်အထူးခွဲချည်နှောင်ခြင်းများကိုတိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည် အပြိုင်ဒေတာအပြောင်းအလဲနဲ့.
ဤအဆင့်တွင် Proof of Work ယန္တရားအဟောင်းများကိုကွန်ယက်အသစ်တွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ အကျိုးဆက်အားဤအချိန်၌မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကွင်းဆက်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့မှတ်တမ်းများလွှဲပြောင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ PoW ကွင်းဆက်၏အရောင်းအ ၀ ယ်သမိုင်းသည် Ethereum 2.0 ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိလိမ့်မည်။ ဤအဆင့်သည်အဆင့် ၁ ပြီးဆုံးသည်နှင့်မကြာမီဖြစ်ပျက်သင့်သည်။
ဤအဆင့်တွင် Ethereum 1.0 နှင့် Ethereum 2.0 chain နှစ်ခုပေါင်းစည်းပြီးမကြာမီ Ethereum Virtual Machine ကိုအစားထိုးလိမ့်မည်။ ဤအဆင့်နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာမရှိပါ၊ သို့သော် ၀ က်ဘ်တပ်ဆင်မှုပုံစံပေါ် အခြေခံ၍ ဖြစ်သော virtual machine အသစ်ကို Ethereum WebAssembly (EWASM) ဟုခေါ်လိမ့်မည်။
ဒီမွမ်းမံမှုနှင့်အတူ Dapp hosting နှင့်စမတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမှုသည် Ethereum 2.0 တွင်အပြည့်အဝတိုးတက်လိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Ethereum သည်ဤအဆင့်ကိုမပြီးဆုံးမှသာအဆင့်မြှင့်တင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
လမ်းသည်ရှည်လျားပြီးအကွေ့အကောက်များသော်လည်း Ethereum 2.0 ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကလူအများအားပါးစပ်ဖြင့်ရေပေးသည်။ ကမ္ဘာကြီးပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည် Ethereum အသုံးပြုသူများကိုအကျိုးရှိစေရုံသာမကစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးအားအနာဂတ်အတွက်အကျိုးရှိစေမည့်အဓိက update တစ်ခုဖြစ်သည်။
လူအများစုက Ethereum သည် Bitcoin ကိုအမီလိုက်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ငါလည်းအဲဒီလိုထင်တယ် ဆိုလိုသည်မှာ၎င်း၏တန်ဖိုးသည်အဆ ၂၀ တိုးလာခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
ကော်မရှင်များအတွက် ၂၀% လျှော့စျေးဖြင့် BINANCE တွင် ETHEREUM ကိုဝယ်ပါ
ဒီနေရာမှာဘယ်လိုဖတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီမှာဖတ်နိုင်ပါတယ် Binance အပေါ်လျှော့စျေးအများဆုံးပါစေ.